Calaamadaha dadka - Bisha March
Bogga ugu weyn » Calaamadaha aadanaha
Laga soo bilaabo IES Punta Larga ee Santa Cruz de Tenerife, waa ay noo soo diraan
Sawirada Wareegga 2-aad ee Wareega Waxbaridda iyo Dhaqan-bulsheedka, moduleka ATL
Waxaan kuu soo dirineynaa fiidiyowga astaanta aadanaha ee rabshadaha oo ardayda iyo macallimiinta xaruntu sameeyeen bishii Sebtember ee la soo dhaafay 26.
Ardayda Machadka El Casar
Ardayda IES Campiña Alta iyo IES Juán García Valdemora
Munaasabadda Maalinta Caalamiga ah ee Rabshadaha iyo bilowga Maarso 2aad ee Adduunka, 200 arday oo ka qalin jabisay IES Campiña Alta iyo IES Juán García Valdemora, iyo 50 qof oo waaweyn oo reer El Casar ah ayaa sameeyay Calaamadda Aadanaha ee Rabshadaha.
IES MiraCamp waxay noogu sheegaan:
Waxaan ku faahfaahinnay mowduuca ololahaaga, "Calaamadaha Aadanaha ee Nabadda iyo Rabshadaha".
Waxaan u aragnaa soo jeedintaada mid aad u xiiso badan, waana sababta aan kuugu soo dirno shaqadayada ardayda.
Laga soo bilaabo IES Antonio Machado u soo dir kooxdan sawirada sida ay u sameeyeen astaamaha Nabadda Aadanaha.
Laga soo bilaabo Dugsiga Sare ee Rosales ee Madrid, waxay noo soo diraan Calaamadaan Aadanaha Quruxda badan ee Nabadda.
Calaamadaha Aadanaha iyo Xaashida Nabadda
Waxqabadka "AADANAHA AADANAHA IYO SABANA DE LA PAZ" waxaa lagu horumariyey ardayda dugsiga sare iyo kuwa hoose ee ka socda dugsiga "Villa Maria Cano" ee ku yaal magaalada Mosquera Cundinamarca (Kolombiya).
Lagu qabtay hawlo madadaalo oo kor loogu qaadayo wacyiga bulshada ee arrimaha nabadda iyo rabshadaha iyo in la faafiyo 2da Maarso ee Nabadda iyo Rabshadaha.
Machad waxbarasho oo ku yaal Tamil Nadu
Machadka waxbarashada ee Tamil Nadu (India)
30 ee Agoosto ee 2019, Calaamadaha Nabadda ayaa lagu xaqiijiyey Machadka Waxbarashada ee Tamil Nadu (India).
Dugsiga Gamo Diana
Laga soo bilaabo Iskuulka Gamo Diana - Madrid
Maalinta Nabadda iyo Rabshad la'aanta 2019, waxaan ku soo lifaaqayaa calaamad aan ka sameynay Jannaayo 30 xarunteyga.
Laga soo bilaabo CEIP Cardenal Herrera Oria ee Madrid, maalinta nabadda iyo rabshad la'aanta 2019, waxay gudbiyaan farriintan quruxda badan
Kuwii aad u jeclaa:
Ugu horreyntii, waxaan kuugu mahadnaqayaa waxqabadkan quruxda badan.
Shalay waxaan ku xusnay Maalinta Nabadda dugsiga. Heer waliba waxay sameysay silsilad midab gaar ah xambaarsan fariin nabadeed iyo jacayl. Barxadda dhexdeeda silsiladihii oo dhan way isku xirnaayeen waxaanan abuurnay goobaabin hal ku dheggeedu yahay "Markaan sii xoogaysano ayaan nahay"
Farriimaha nabadda waxaa loo akhriyay, ka soo horjeeda rabshadaha nooc kasta oo aan ku heesay hees.
Waxaan kuu soo direynaa sawir leh silsiladda jacaylka dugsiga ee aan dooneyno in aan ka badino dunida oo idil.
Iyadoo aanad gaarin, waxaad heleysaa salaan qadiyad ah.
Kursi dheeraad ah